Inkqubo yoLonwabo lweMoto, Inkqubo yeAudio Car, Imoto yeaudio
I-Shenzhen LH Xmart Technology Co., Ltd.yasekwa ngo-2009, besihlala sigxile kwiimveliso ze-elektroniki eziPhakamileyo kunye ne-Smart kwicandelo lophando oluzimeleyo kunye nobuchwephesha bokuyila, sijolise kwimoto ye-dvd yemoto, kwimoto yemultimedia yemoto ye-GPS. imoto yodidi: njengeBMW, BENZ, AUDI.
Imoto ye-Android kunye ne-navi s ...
I-LH Xmart.we ibekwe kwisithili saseBaoan e-Shenzhen China, iphuhlise ukuba yi-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo kwelinye lamashishini aphakamileyo obuchwephesha, ngeli xesha iimveliso zethu zithunyelwe ngasentshona Yurophu, embindini empuma, mpuma Asia, iimarike North American, ngakumbi ngoku ukwandisa kwamanye amazwe kunye nemimandla, iimveliso zethu win igama elihle kubo bonke abathengi bethu.
Inkonzo: iwaranti yethu yeemveliso ziimitha ezi-3 zokutshintshwa, i-1 kunye nesiqingatha sonyaka se-guarrantee, ubomi bonke bokulungiswa ngaphandle kwempahla yasimahla.
Iimpawu zentsulungeko: impumelelo yabathengi, enzulu noxanduva, ukuthembeka kunye nokuziphatha, ukusebenza nzima kunye nokuzama, ukuphumelela ukubambisana.
Injongo: Ngqongqo, ngobungcali, ukusebenza nzima, kunye nepragmatic.
Agasti 19, 2020
Njengokuba i-Intanethi ingene ebomini bethu, izixhobo zasekhaya, izixhobo zombane, kunye neemoto nazo ziqalisile ukugxininisa kubukrelekrele. Iimfuno zabathengi kwiimoto azisekho kwizithuthi ezinamavili amane, bafuna iimoto ukuba zibe yindawo yokuhlala ehambayo. Ke ngoko, i-Inte ...
Ngaba inkqubo yakho yemoto ihlakaniphile? Kububulumko ngokwenene ukuba unomsebenzi onjalo, kuxhomekeke ekubeni uyahlangabezana nomgangatho
Ngokuphuculwa komgangatho wobomi babantu, iimfuno zeemoto ziya zisonyuka. Lonke ulungiselelo kwimoto kufuneka luhlangabeze iimfuno zabo. Okuphambili kuya kunikwa loluphi uphawu lweemodeli, ezinje ngobungakanani beewindows kunye nokusetyenziswa kwendawo yokugcina. Kukwakho ne ...
Ilizwe leemoto kunye noomatshini ayifuni mpumelelo engaka
Ukuba umntu othile ukubuza malunga nezinto eziphambili ekuthengeni kwakho imoto, ungaphendula uthini? Mhlawumbi uya kuthi ngaphandle kokucinga: ukubonakala, indawo, amandla, ubomi bebhetri. Kodwa into endifuna ukuyithetha kukuba kukuphithizela okukhoyo ngoku okuqhuba ngokuqonda, ndiyoyika ukuba umatshini wemoto sys ...